Adeegyada caafimaadka ee Ballanbale oo laga dayrinayo iyo cabsida laga qabo cudurada faafa oo jirta – Radio Daljir
Adeegyada caafimaadka ee Ballanbale oo laga dayrinayo iyo cabsida laga qabo cudurada faafa oo jirta
Seteembar 5, 2013 4:43 b 0
Balanbale, September 5, 2013 – Xaalada caafimaadka ee degmada Balanballe ee Galguduud ayaa laga dayrinayaa, xili aysan jirin goobo? caafimaad oo dadka deegaanka ay tagaan mudo ku dhow hal sano.
Maamulka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee degmada ayaa shaaciyey in xaalad daran ay jirto, waxay sheegeen in marxalada aloosan ay ahayd mid soo jirtay, balse ay haatan cabsi kale oo cusub jirto.
Maxamuud Maxamed Cabdi Is-turaaye gudoomiye ku xigeenka degmada Balanbale ee Galguduud, wuxuu sheegay in ay dhamaadeen biyihii nadiifta ahaa ee degmada, sidoo kale waxaa la filayaa roobab dhowaan curanaya, kuwaas oo iyana laga qabo cabsi kale in ay cuduro faafa ka dilaacaan.
Xaalada caafimaad xumo ayaa aad u saamaysay dadka deegaanka Balanbale oo idil, balse waxay raad adag ku reebtay dadka danyarta ah ee deegaanka jooga.
Maamulka Dowladda federaalka ah ee degmada Balanbale waxay ka dalbadeen dowladda iyo hay?adaha caalamiga ah in wax laga qabto xaalada caafimaad xumo iyo baahida adeegyada caafimaadka ee ay qabaan bulshada degmada.